नेपालमा दैनिक २५ देखि ३० करोडको मोबाइल कारोबार | Nagarik News - Nepal Republic Media
९ फाल्गुन २०७५ २ मिनेट पाठ
भिडियो रिपोर्ट : बिश्वास खनाल
काठमाडौं – सूचना प्रविधि प्रयोगको बलियो माध्यम हो मोबाइल फोन सेवा। जसबाट पलपलको सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ।
अहिले नेपालका हरेक व्यक्तिको हातमा लगभग मोबाइल फोन पुगिसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समय यसको प्रयोगकर्ता झन् बढ्दै गएको देखिछ। प्रयोगसँगै यसकाब्रान्ड र स्वरूप पनि थपिएका छन्। नेपालमा मोबाइल फोनको बजार अवस्था कस्तो छ त ? कुल जनसंख्याको कति प्रतिशतले मोबाइल बोक्छन् ? यसै विषयमा आजको रिपोर्ट केन्द्रित छ।
दैनिक ७ देखि ८ हजार थानसम्म मोबाइल फोन नेपाली बजारमा बिक्छ। तिनमा पनि पछिल्लो समय प्रविधिमा आधारित, सामाजिक सञ्जालको सहज प्रयोग लगायतले मोबाइलमा ग्राहकको ध्यान गएको देखिन्छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ १९:१९ बिहीबार
नेपाल मोबाइल कारोबार